I-Norm alt ne-ast kwabesifazane > Isifo sikashukela
Muva nje, cishe kuwo wonke amadolobha aseRussia Federation, kwenziwa ukuhlolwa kwezokwelapha kwabantu, okuvumela ukukhomba izifo eziningi ezigabeni zokuqala bese kunciphisa ubungozi bokushona ngaphambi kwesikhathi.
Izinkomba ezibalulekile zomsebenzi wesibindi
Izifo zesibindi ziphakathi kwezinto ezivame kakhulu futhi eziyingozi ngenxa yenkambo ye-asymptomatic. Esigabeni sokuhlolwa kwesibuko, kanye nezinye izifundo, isiguli sinikezwa ukuhlolwa kwegazi kwe-biochemistry, izinkomba eziphambili zazo okuhloswe ngazo ukuthola ukuthi isibindi sisebenza kanjani. Isimo se-ALT ne-AST esegazini sincike ngokuphelele emsebenzi wesitho esibaluleke kakhulu se-parenchymal - isibindi, esenza imisebenzi efana nale:
Ukudukiswa emzimbeni - ukuqedwa kwezinto ezinobuthi kanye nobungozi emzimbeni.
Ukukhiqizwa kwezinto ezinamakhemikhali adingekayo emzimbeni.
Ukugcinwa kwe-glycogen - i-polysaccharide, edingekayo ekusebenzeni okugcwele komzimba.
Ukulawulwa kokuphendula okune-biochemical of synthesis nokubola kwama-microparticles amaningi.
I-ALT ne-AST ngama-enymes akhiqizwa ikakhulukazi isibindi futhi abandakanyeka kukho konke ukuphendulwa kwemvelo ye-biochemical.
Isimo se-ALT ne-AST esegazini sincike ezintweni eziningi, kufaka phakathi ubulili nobudala. Ngenxa yokuntuleka kwezinga elihlanganisiwe cishe kuzo zonke izikhungo zezokwelapha, ilabhorethri isungula ezayo izindinganiso ze-ALT ne-AST, ngenxa yalesi sizathu konke ukuhlaziya kufanele kubhekiswe kudokotela okuqaphile, futhi ungazibandakanyi ekubhalweni okuzimele. Ibanga elijwayelekile yile:
Imvelo ye-AST esegazini isuka ku-5 iye ku-40 IU / l.
Isimo se-ALT esegazini kwabesifazane: sisuka ku-7 siye ku-35 IU / l.
Isimo se-ALT esegazini emadodeni: sisuka ku-10 saya ku-40 IU / l.
Ukwanda okuncane kwe-ALT ne-AST emzimbeni kuvame ukungalingani, kodwa kubonisa ukungasebenzi kahle esibindini.
Imbangela enkulu yokwanda kwama-enzymes wesibindi egazini yile:
Ukunyuka kwe-ALT ne-AST ngenxa yezifo zezinye izicubu (i-autoimmune thyroiditis, i-pancreatitis, i-mononucleosis).
Izilonda ezinzima zesibindi ezingadalwa utshwala, izidakamizwa kanye / noma isenzo segciwane.
Ama-metastases noma ama-neoplasms esibindini.
Izimpawu zokuqala ze-ALT ezikhulayo ne-AST yilezi:
Ukwehla kwesifiso sokudla futhi, ngenxa yalokho, ukuncipha kwesisindo.
Izimpawu zokufika kwesikhathi kwe-ALT ne-AST ekhuphukile
Ukuvuvukala kwamaphethelo, ama-ascites (ukuba khona kwegesi yamahhala we-pathological esiswini).
Isikhumba, amaprotheni, ulwelwesi lwama-mucous zithola i-tint ephuzi.
Ukushintsha umbala womchamo - umchamo umbala webhiya omnyama, ukucwilisa kwezindunduma.
Izimpawu ezandayo zokudakwa (ukuzizwa ungathandeki, ubuthakathaka, isicanucanu, i-hyperthermia, njll.).
Ezinye izindlela zokuxilonga:
Ukuxilongwa kwe-Ultrasound kwezitho zesisu, uma kunesidingo - indlala yegilo.
Ukuhlolwa kwegazi kwamamaki we-hepatitis B, uC.
Ukuhlolwa kwegazi okwelashwa.
Ukuhlolwa kwegazi kwama-hormone egilo kanye nama-antibodies.
Uma kunesidingo, i-biopsy yesibindi.
Imithetho, ebheka ukuthi, umuntu anganciphisa izinkomba ze-AST ne-ALT, yile:
Yidla imifino nezithelo eziningi ngangokunokwenzeka, kanye nelayisi elinsundu - aqukethe i-fiber.
Phuza itiye eliluhlaza kanye netiye le-herbal, okubandakanya izimpande ze-dandelion, ubisi lwethanga, izimpande zesisindo somzimba
Ukudla kwakho kufanele kube nokudla okuqukethe amavithamini C.
Landela umbuso wokuphuza ngesilinganiso esingu-30 ml wetshezi nge-1 kg yesisindo.
Yenza izivivinyo zokuphefumula.
I-ALT ne-AST - okujwayelekile kwabesifazane
Igazi liqukethe inani elikhulu lezinto ezahlukene nezakhi. Esikhathini esiningi sizwa ngamangqamuzana egazi abomvu, amaseli amhlophe egazi, ama-platelet. Batshelwa ngisho nasekilasini le-anatomy. Eqinisweni, kukhona okukhulunywa ngakho ezifundweni zesikole mayelana ne-ALT ne-AST, kanye nokujwayelekile kwabo kwabesifazane. Kepha, njengomthetho, lolu lwazi ludlula ngokuphepha futhi ukhohliwe.
Imvelo ye-ALT ne-AST esegazini labesifazane
Lezi zinto zingokwesigaba sama-enzyme. I-AST - aspartate aminotransferase - isakhi segazi esithuthukisa ukuhamba kwe-ampartate amino acid sisuka kwelinye biomolecule sisiya kwelinye. I-ALT - i-alanine aminotransraserase iyi-enzyme eyenza umsebenzi ofanayo ngokuhambisa i-alanine. Kokubili lokho nenye into kukhiqizwa kwe-intracellularly futhi kungena ukungena kwegazi ngamanani amancane.
Ngokwezifiso, i-ALT esegazini labesifazane akufanele ibe ngaphezu kwama-30 - 32 amayunithi ngelitha. Futhi inombolo ye-AST kuleli cala ingahluka kusuka kumayunithi angama-20 kuye kwangama-40. Uma izinkomba ziphambuka kusuka kunani elijwayelekile ziye ngezinga elikhulu noma elincane, khona-ke kukhona izinguquko emzimbeni. Futhi ukwenza isiqiniseko sokuthi azinangozi, kungakuhle ukuthi ufune izeluleko zochwepheshe.
Kusho ukuthini ukuphambuka kwe-AST ne-ALT esejwayelekile esivivinyweni segazi esine-biochemical?
Inani lama-enzyme lingashintsha futhi kancane emzimbeni womuntu onempilo. Lokhu kungathinteka ngu:
Ukusetshenziswa isikhathi eside kwemithi enamandla (ama-antibhayirasi, ama-barbiturates, izidakamizwa ze-narcotic, izidakamizwa zokuvimbela inzalo, izithiyo zokuvimbela inzalo),
ukuhlinzwa maduze ngaphambi kokuhlolwa.
Imvamisa, i-ALT iphakeme kakhulu kunokujwayelekile kwabesifazane abakhulelwe. Isimo esinjalo asithathwa njengokuphambuka, futhi asibonisi isifo.
Isizathu esiyinhloko wukushintsha kwamazinga ama-hormone. Imvamisa, izinga lama-enzyme libuyela emuva ngokujwayelekile.
Okubucayi kungukuphambuka okungamashumi noma noma amakhulukhulu ezikhathi kuhluke kunani elijwayelekile. Izici ezilandelayo zinomthelela ekunwetsheni kwe-ALT ne-AST:
Izinga le-alanine aminotransferase likhuphuka kakhulu nge-hepatitis. Kwesinye isikhathi, ngenxa yokuhlaziywa kwe-ALT ne-AST, uhlobo lokugula “A” lunqunywa isonto ngaphambi kokuvela kwezimpawu zalo zokuqala.
I-Cirrhosis - isifo esiyimfihlo kakhulu. Isikhathi eside, izimpawu zayo zingase zingabonakali. Futhi ukukhathala kwesimilo kwalesi sifo kufakwa kolunye usuku olubi. Uma umuzwa wokukhathala ekuhlupha ngokuqina okunganqobeki, kuyalulekwa kakhulu ukuthi uhlolwe igazi. Alanine aminotransferase amazinga azokhombisa uma kunesizathu sokukhathazeka.
Ukudlula kwe-ALT ne-AST ekuhlaziyeni kungakhombisa ukuqothuka kwe-myocardial. Lesi sifo siqala imvelaphi yokuphazamiseka kokujikeleza kwegazi futhi kuvezwa ngokufa kwezicubu zenhliziyo.
I-Mononucleosis nayo inganqunywa ngenani lama-enzyme. Lesi yisifo somsuka wokutheleleka, lapho kungagcini nje kuphela ukwakheka kwegazi, kodwa futhi ukuwohloka kwesibindi nobubanzi kuyabonakala.
Ukubonisa ukwanda kwenani le-ALT ne-AST nakho kungaba mayelana ne-steatosis, isifo lapho amaseli wamafutha aqongelela inani elikhulu esibindini.
Ukuze izivivinyo zikhombise isithombe esithembekile, awukwazi ukudla ukudla okusindayo noma utshwala ngaphambi kokukufaka. Uma uthatha noma imuphi umuthi, udokotela kumele axwayiswe ngalokhu.
Ukuhlolwa kwegazi kwe-ALT
I-ALT (alanine aminotransferase) iyi-enzyme egxile kakhulu ezinso, inhliziyo, isibindi kanye namanyikwe. Endabeni yesifo sabo, iqala ukuvela ngaphandle kwamaseli abhujisiwe, ngenxa yalokho izinga layo egazini likhuphuka.
Ukuze imiphumela yokuhlolwa ithembeke ngangokunokwenzeka, kuhlaziywa i-biThemical ALT ekuseni ekuseni ngesisu esingenalutho. Uma ukumiswa kwaso kukhombisa ukuthi umsebenzi we-enzyme uphakeme kunokwejwayelekile, lokhu kungaba uphawu lwezifo ezilandelayo:
Isimo se-ALT esegazini sehlukile kwabesifazane nabesilisa. Esimweni sokuqala, akufanele ibe ngaphezulu kwama-31 amayunithi / ilitha, kuthi owesibili - amayunithi angama-45 / ilitha. Uma sikhuluma ngezingane, khona-ke zinokujwayelekile kwalesi sikhombisi, ngezindlela eziningi, kuya ngeminyaka, kepha akufanele sidlule ku-50 u / l.
UGalina Savina: Ngikwazi kanjani ukunqoba i-pancreatitis ekhaya ngeviki eli-1, nginike imizuzu engama-30 ngosuku?!
Uma i-ALT iphakanyisiwe, lokhu kukhombisa ukulimala kwezitho ezitholakala inani lazo elikhulu kunazo zonke. Ukwanda komsebenzi wale nto kwenzeka ngaphambi kokuba izimpawu zokuqala zesifo ziqale ukuzibonakalisa. Ngaphezu kwalokho, izinga layo eliphakeme egazini lingabangelwa yizici ezinjengokuhlukumezeka, ukusebenza ngokomzimba ngokweqile noma ukuthatha imishanguzo ethile.
Ukuhlolwa kwegazi kwe-AST
I-Aspartate aminotransferase iyinto etholakala ezinso, esibindini, emaphashini, enhliziyweni, kumanyikwe, nasezithanjeni zezinzwa. Ngokubhujiswa kwamangqamuzana kulezi zitho, izinga lawo egazini landa kakhulu.
Ngaphambi kokudlulisa ukuhlaziywa kwe-AST ye-biochemical, kunconywa ukuthi kungathathi noma yikuphi ukudla amahora ayisishiyagalombili. Isimo sakhona kwabesifazane sisuka kuma-5 - 31 amayunithi / l, futhi sisuka kuma-5 - 41 amayunithi / l kwabesilisa. Ukweqa isilinganiso senkomba kungakhombisa ukuba khona kwezifo ezilandelayo:
Ngaphezu kwalokho, i-AST ingakhuphuka ngenxa yokulimala kwemisipha yamathambo, ukushiswa ukushisa nokushiswa.
I-ALT ne-AST ye-pancreatitis
Ngabe imibhalo ihlaziywa kanjani i-ALT ne-AST ye-pancreatitis? Lapho uthola ukuba khona kwe-aspartate aminotransferase egazini, kufanele kunqunywe ukuthi ingakanani le enzyme edlula evamile, efinyelela kuma-31 u / l kwabesifazane aze afike ku-37 u / l emadodeni. Ngokukhuculula lesi sifo, singaphakama izikhathi ezi-2 kuye kwezi-5. Ezinye izinkomba zesifo zifaka isifo sohudo, ukuncipha kwesisindo nobuhlungu enkabeni.
Inani le-alanine aminotransferase egazini libuye likhuphuke ngokuvuvukala kwezicubu ze-pancreatic. Uma inkomba ihlukile kokujwayelekile ngezikhathi ezi-6 ukuya kwezi-10, singakhuluma ngeveli eliphakathi le-ALT ekhuphukile, futhi uma izikhathi eziyi-10, lapho-ke izinga eliphakeme lokuqukethwe kwayo.
Kufanele kukhunjulwe ukuthi ngaphambi kokuthatha izivivinyo, akunconywa ukuthatha imishanguzo engakhuphula izinga lale enzymes, futhi inikeze umzimba imithwalo eqinile, ngoba lokhu kungathinta ukunemba kwezilinganiso.
I-pancreatitis yisifo esihambisana nomuntu impilo yakhe yonke. Ukuze iqhubeke ngaphandle kokukhuculula, iziguli kudingeka zivame ukuhlolwa i-ALT ne-AST. Ngaphezu kwalokho, ekwelapheni i-pancreas, iziguli zidinga ukuthatha ama-enzyme akhethekile nemithi yokudambisa izidakamizwa ebekwe udokotela wayo.
UVeronika Zueva: Odokotela bashaqeka! Ngalulama ekuqotheni i-pancreatitis ekhaya.
Imisebenzi ye-ALT ne-AST emzimbeni
Ama-enzymes we-Intracellular - ama-transaminases noma ama-aminotransferases - enza umsebenzi wokuhambisa emzimbeni, ebamba iqhaza ekwenziweni kwama-amino acid:
alanine aminotransferase udlulisa i-alanine,
i-aspartic transaminase - i-aspartic acid.
Kungakho igama lamaprotheni athile. Ngaphezu kwalokho, iqembu ngalinye linendawo yalo emzimbeni womuntu. Ukuhlushwa okuphezulu kwe-ALT kuyabonakala esibindini, kanye ne-AST enhliziyweni.
Ama-transaminases atholakala ngaphakathi kuphela kwamangqamuzana, bese engena egazini ngenxa yokuchitheka kwezicubu. Ngakho-ke, ukwanda kwe-aminotransferases egazini kubonisa izinqubo ze-pathological - pancreatitis, hepatitis, ukushaya kwenhliziyo.
Ithebula "Norm ALT ne-AST"
Isigaba seziguli Amanani ajwayelekile, U / L
Kwabesifazane Kufika kuma-31 Kufika kuma-31
Emadodeni Kufika kuma-45 Kufika kuma-47
Ezinganeni kusukela ngosuku lokuqala kuya ezinsukwini eziyisithupha zokuphila Kufika kuma-49 Kufika kuma-105
Enganeni kuze kube izinyanga eziyisithupha Kufika kuma-60 Kufika kuma-83
Ezinganeni kusuka ezinyangeni ezi-6 kuye kunyaka ongu-1 Kufika kuma-55 Kufika ku-59
Iminyaka engu-1-3 Kufika kuma-34 Kufika kuma-38
Iminyaka engu-3-6 29-32
6 kuya ku-15 ubudala Kufika kuma-39
Ngesikhathi sokukhulelwa Kufika kuma-32 Kufika kuma-30
Ukuphambuka okuncane kwezinkomba ezine-bilirubin ejwayelekile, i-alkaline phosphatase ne-albhamuin kuvumelekile futhi akuyona inkambiso yokuziphatha.
Kungani i-ALT ne-AST bephakeme kunokwejwayelekile?
Ukubona isizathu esithile sokwanda kwabamaka ku-biochemistry yegazi, kubalulekile ukunquma isilinganiso sokwanda okungafaniyo kokudluliselwa kwe-ALT noma i-AST.
Ukwanda okuncane (okuphindwe kaningi kunokujwayelekile) kwenzeka nge-hepatitis yegciwane, ukulimala kwesibindi esinamafutha, i-steatohepatosis. Amanye amamaki we-biochemistry yegazi nawo ayaguquka - i-bilirubin, ukwanda kwe-alkaline phosphatase.
Ukwanda okulinganiselayo (kusuka kwezikhathi ezi-5 kuye kwezingu-20) - ukuvuvukala izicubu zesibindi zemvelo engapheli noma ebukhali, i-viral, i-hepatitis yotshwala, ukuthuthukiswa kwe-cirrhosis.
Izinga eliphawulwayo lokukhuphuka kwama-aminotransferases (izikhathi ezingaphezu kwezingu-20) inkambo enzima yokuqothuka kwesidakamizwa noma okunobuthi kwesibindi, i-hepatitis eyingozi, i-pancreatitis noma i-atrophy yezicubu zesibindi, i-myocarditis, ischemia. Akuwona kuphela ama-transaminases akhuphukayo, kodwa futhi ne-cholesterol, i-bilirubin.
Izinkomba ezibucayi (ezidlula ku-2000-3000 U / L) - ubufakazi bokufa kwezindawo zemisipha yenhliziyo (infarction ebanzi ye-myocardial), amangqamuzana omdlavuza kwizicubu zesibindi, i-overdose yezidakamizwa ezithile (ukudakwa kakhulu).
Ukwanda okunamandla kwama-aminotransferases kubonisa ukukhula kwe-hepatitis eyingozi
Ngezinqubo ezonakalisayo esibindini, i-ALT isuka esikalini bese i-AST inyuka kancane. Ukuqunjelwa okukhulu kwe-aspartic transaminase ibonwa ku-necrosis eyingozi yemisipha yenhliziyo (ukushaya kwenhliziyo) namanye ama-pathologies enhliziyo anzima, lapho izicubu zezitho zibhujiswa futhi inani elikhulu le-enzyme ethile likhishwa egazini.
Kubalulekile! Uma izinga le-ALT ne-AST lenyuka kancane ngesikhathi sokukhulelwa, lokhu kuyinto eyamukelekayo, imbangela yokuqhuma kwama-hormone ngesikhathi sokushintsha kwesizinda se-hormonal sowesifazane. Ama-transaminase akhula ngokubabazekayo angakhombisa ukungasebenzi kahle kwesibindi, amanyikwe kanye ne-pathology ohlelweni lwenhliziyo. Lapha udinga ukuhlolwa okugcwele nokubhekwa kwezokwelapha.
Ukuhlolwa kwegazi kokuhlolwa kwesibindi (i-ALT ne-AST aminotransferases) kungabekelwa izifo ezisolwa kakhulu zezitho zesistimu yenhliziyo nokugaya ukudla.
Ukuthuthukiswa kwe-hepatitis (i-viral noma i-alcoholic).
Izinkinga ezinkulu ngesikhathi sokukhulelwa (gestosis).
I-acute mononucleosis, esisabalalela esibindini nasebondeni. Ngalesi sikhathi, kunokubhujiswa okunamandla kwamangqamuzana esitho esibalulekile, okucasulayo ukukhishwa okukhulu kwe-enzyme ye-hepatic ebhubhisiwe kuyi-plasma
Izinguquko ze-pathological ezicutshini zenhliziyo - myocarditis, ischemia, pericarditis. I-ALT ne-AST inyuka ngokushesha okukhulu egazini ku-infyoctional myocardial acute (amanani aqakathekileko abonwa ezinsukwini ezimbili ngemuva kokuqothuka kwemisipha yenhliziyo.)
Ukuhlaziywa kwe-ALT ne-AST kufanele kwenziwe uma kusolwa i-hepatitis
Ukuhlaziywa ku-ALT kukuvumela ukuthi unqume isifo sesibindi ezigabeni zokuqala, ngaphandle kokulinda uphawu oluphambili - i-jaundice. Ochwepheshe bavame ukunikeza isifundo esinjalo uma umzimba ubolekiswa ekwelashweni kwezokwelapha okuhlala isikhathi eside noma udakiwe.
Izinkomba zokwenza i-biochemistry yegazi zingaba yizimpawu ezifana:
Ubuhlungu esiswini, imizwa yosizi ngakwesokunene,
umbala ophuzi wesikhumba, izikwele zamehlo kanye nolwelwesi lwama-mucous,
umuzwa ongapheli wokukhathala, ukuwohloka,
ukuphazamiseka kwamathumbu nesisu (isifo sohudo, ukuqunjelwa, ukuqhakaza, ukulahleka kwesifiso sokudla).
Ukusetshenziswa njalo kokudla okunamafutha, ukusebenzisa kabi utshwala, ukucindezelwa kanye noxinzelelo lwezinzwa konke kungadala i-hypertransanemysemia. Ngamagama alula, ukwanda komsebenzi wama-transaminases kungavela nanoma yikuphi okulimazayo okulimazayo. Ngakho-ke, kuyadingeka ukubheka njalo isimo sezitho zomzimba nge-biochemistry yegazi kuma-ALT nama-AST amaki.
Ungakulungiselela kanjani ukuhlaziya
Isithombe sangempela somtholampilo sesimo sesiguli ikakhulu sincike ekuzilungiseleleni ukuhlolwa kwegazi kwe-biochemical.Isiguli kufanele siyithathe ngokungathí sina inqubo, ibheke yonke imithetho.
Isampula yegazi yenziwa ekuseni. Isiguli sidinga ukwenqaba ukudla ukudla nanoma yiziphi iziphuzo amahora angama-8-10. Ungaphuza amanzi ngaphandle kwegesi.
Noma yikuphi ukudakwa komzimba kuthinta umphumela wokuhlaziywa. Ngakho-ke, okungenani ezinsukwini ezingama-7 kuya kwezingu-10 ngaphambi kokunikela ngegazi, kubalulekile ukuyeka utshwala, ugwayi kanye nanoma yimuphi umuthi.
Ngezinsuku ezingama-2-3, nciphisa ukusebenza komzimba, ungaphakamisi izinsimbi, unciphise ukuziqeqesha ejimini. Lokhu kuzosiza ukugwema izicubu zomzimba ezibushelelezi ezingakhuphula ama-transaminases.
Khawulela ingcindezi kanye nokuxineka ngokomzwelo ezinsukwini ezimbalwa ngaphambi kocwaningo.
Ungadli okunamafutha nokudla okungenamsoco okungenani ezinsukwini ezingama-2-3 ngaphambi kokuqoqwa kwezinto eziphilayo.
Ezimweni lapho isiguli sihlala sithatha khona imishanguzo futhi singakwazi ukwenqaba ngaphambi kokuhlolwa, kubalulekile ukwazisa udokotela.
Ungabuphuzi utshwala ngeviki ngaphambi kokuhlolwa.
Ithebula "Amaqembu wezidakamizwa ukunciphisa i-ALT ne-AST egazini"
Amaqembu ezidakamizwa Igama lezidakamizwa
Ama-Hepatoprotectors (buyisela umsebenzi wesibindi, akhuthaze ukuvuselelwa kwezicubu ezonakele, avikele isitho ekunxebeni okuhlukahlukene) IHeptral, Carsil, Ovesol, Forte Essential, Phosphogliv, Hofitol,
Ama-enzymes (qeda ukuvuvukala kumanyikwe, ubuyise izicubu ezonakele ezithweni) I-Festal, i-Enzyme forte, iMezim, iPancreatim
Ama-analgesics nama-antispasmodics (ukuthola usizo lwama-syndromes obuhlungu obunzima) I-No-shpa, iGastrocepin, i-Atropine, iPapaverine, uPlifillillin
Ukulungiselela kwenhliziyo (ekwelapheni izifo zenhliziyo nezemithambo) Digitoxin, Quinidine, Midodrin, Timolol, Amlodipine, Carvedilol
Ukwelashwa kwezidakamizwa kunqunywa kuphela uchwepheshe ngemuva kokuhlolwa okugcwele nangokuphelele. Kwenqatshelwe ukuthatha imithi ngokwakho ngaphandle kokuxilongwa okuyikho.
Ukuqoqwa kwamakhambi ezifo zesibindi
Kuyadingeka ukuxuba i-20 g ye-celandine ne-dieelle kanye ne-wort yaseSt. (40 g ngayinye). Faka izinto zokusetshenziswa ezingavuthiwe ku-thermos bese uthela amalitha ayi-1.5 wamanzi abilayo. I-infusion ilungele ukusetshenziswa emahoreni ayi-10-12. Udinga ukuphuza umuthi amahlandla ama-4 ngosuku izinsuku eziyi-14. Lokhu kuzosiza ukunciphisa ama-transaminases ngokulungisa amaseli wesibindi.
Ukupheka umhluzi we-herbal kungcono ku-thermos
Ukufakwa kwe-Adonis kwama-pathologies enhliziyo
Engilazini yamanzi abilayo, yenza u-1 tsp. amakhambi okwelapha, bopha futhi akuyeke ukwenze okungenani amahora amabili. Uketshezi kufanele luphuzwe esiswini esingenalutho, bese ulwengeza kaninginingi phakathi nosuku. Umthamo - 1 tbsp. l Inkambo yokwelashwa iyizinsuku eziyi-12-15.
Ukufakwa kwe-Adonis kusiza ngesifo senhliziyo
I-ALT ejwayelekile ne-AST
Ukuzimisela kwalezi enzyme kwenziwa ukuhlaziywa kwe-biochemical.
Ukuthola imiphumela yokuhlaziya enezinga eliphakeme lokuthembela, i-biomaterial yocwaningo lwelabhoratri kufanele ithathwe ekuseni nasesiswini esingenalutho. Kunconywa ukuthi ungadli ukudla ngaphambi kokunikela ngegazi okungenani amahora angama-8.
Izinto zaselebhu zithathwa emthanjeni.
Esimweni esijwayelekile, okuqukethwe yilezi enzymene egazini lomuntu kuyahluka ngokuya ngobulili.
Kwabesifazane, izinga lithathwa njengejwayelekile, alwedluli kuzo zombili izinkomba inani le-31 IU / l. Engxenyeni yesilisa yabantu, izinkomba ezijwayelekile ze-alanine aminotransferase zithathwa njengezingekho ngaphezulu kwe-45 IU / L, futhi kuma-aspartate aminotransferase, izinga elijwayelekile emadodeni lingaphansi kwama-47 IU / L.
Ebuntwaneni, le nkomba ingahluka kusuka kuma-50 kuye ku-140 amayunithi / l
Izinkomba ezijwayelekile zokuqukethwe kwalezi enzymes zingahluka ngokuya ngemishini esetshenziselwa ukuhlaziya, ngakho-ke, udokotela kuphela owazi izakhi zelebhu lapho kuhlaziywa khona i-biochemical.
Izimbangela Zamazinga we-Alanine Aminotransferase
Okuqukethwe okuphezulu emgodini wegazi we-alanine aminotransferase kubonisa ubukhona bezifo zalezo zingxenye okuhlanganiswe kuzo lesi sakhi ngobukhulu obukhulu.
Ngokuya ngezinga lokuphambuka kusuka ekuhlushweni okujwayelekile, udokotela angaphakamisa hhayi kuphela ukuba khona kohlobo oluthile lwesifo, kodwa futhi nomsebenzi walo, kanye nezinga lokukhula.
Kungaba nezizathu eziningana zokwanda kwe-enzyme.
Lezi zizathu zingafaka:
IHepatitis nezinye izifo, ezifana ne-cirrhosis, i-hepatosis enamafutha kanye nomdlavuza. Lapho kukhona noma yiluphi uhlobo lwe-hepatitis, ukubhujiswa kwezicubu kwenzeka, okucasulayo ukukhula kwe-ALT. Kanye nokukhula kwalesi sikhombisi, i-hepatitis ibonakala ngokwanda kwe-bilirubin. Imvamisa, ukwanda kwe-ALT egazini kuqala ngaphambi kokuvela kwezimpawu zokuqala zalesi sifo. Izinga lokukhuphuka kokuhlushwa kwe-alanine aminotransferase lilingana nobunzima besifo.
I-Myocardial infarction iholela ekufeni nasekubhujisweni kwemisipha yenhliziyo, okucasulayo ukukhishwa kwe-alanine aminotransferase ne-AST. Ngokuhlaselwa yisifo senhliziyo, ukwanda ngasikhathi sinye kuzo zombili izinkomba kuyabonakala.
Ukuthola ukulimala okuningana ngomonakalo wezakhiwo zemisipha.
Ukuthuthukiswa kwe-pancreatitis e-acute, okuwukuvuvukala kwezicubu ze-pancreatic.
Zonke izizathu zokwanda kwe-ALT zibonisa ukuba khona kwezinqubo ze-pathological kuzitho eziqukethe inani elikhulu lalesi enzyme futhi ezihambisana nokubhujiswa kwezicubu.
Ukwanda kwe-alanine aminotransferase kwenzeka kakhulu ngaphambi kwezimpawu zokuqala zokuthuthukiswa kokukhula kwe-pathology.
Izimbangela zokuphakama kwe-aspinate aminotransferase
Ukwanda kwe-AST emgodini wegazi kukhombisa ukwenzeka kwezifo zenhliziyo, isibindi kanye namanyikwe nokuthuthukiswa kwama-pathologies ekusebenzeni kwalezi zitho zomzimba.
Ukuqina okwandayo kwe-ASaT kungakhombisa ukubhujiswa kwezicubu zezitho eziqukethe inani elikhulu lalolu hlobo lokudluliswa.
Kunezici eziningana ezibangela ukwanda kokuhlushwa kwe-AST.
Izici eziphambili yilezi ezilandelayo:
Ukuthuthukiswa kwe-myocardial infarction kuyimbangela evame kakhulu yokwanda kwenani le-aspartate aminotransferase. Ngokuhlaselwa yisifo senhliziyo, kunokukhuphuka okukhulu kwe-AST ngenkathi kungalikhulisi kakhulu inani le-ALT.
Ukuvela nokuthuthuka kwe-myocarditis kanye nesifo senhliziyo.
I-pathologies yesibindi - i-hepatitis yegciwane kanye ne-hepatitis yemvelo yotshwala neyokwelapha, i-cirrhosis kanye nomdlavuza. Lezi zimo ziholela ekuphakameni kanyekanye kwe-AST ne-ALT.
Ukuthola umuntu ukulimala kakhulu bese kuyashiswa.
Ukuqhubekela phambili kwe-pancreatitis eqatha futhi engamahlalakhona.
Lapho uhumusha imininingwane etholwe ngesikhathi sokuhlaziywa kwe-biochemical kwegazi, kuyadingeka ukuthi unake umehluko wobulili.
I-ALT ne-AST ekutholeni i-pancreatitis
Ngabe kwenziwa kanjani ukuhlelwa kokuhlaziywa kwe-biochemical ngenkathi kwenziwa ucwaningo nge-ALT ne-AST?
I-ALT ne-AST ye-pancreatitis ihlala inamanani anciphile kakhulu.
Uma kwenzeka ukuba khona kwe-aspartate aminotransferase egazini, kuyadingeka ukuthola ukuthi le pharamitha isuka kokujwayelekile kangakanani. Imvamisa, i-aspartate aminotransferase kowesifazane ayidluli ama-31 PIERES / l, futhi emadodeni - hhayi ngaphezulu kwama-37 PIERES.
Endabeni yokwanda kwesifo, ukukhula kwe-amartotransferase ye-aspartate kwenzeka kaningana, kaningi kunokuphakama kokuhlushwa ngezikhathi ezi-2-5. Ngaphezu kwalokho, nge-pancreatitis, kanye nokukhula kwe-aspartate aminotransferase, ukuqala kwezimpawu zobuhlungu kuyabonakala endaweni yenkaba, isisindo somzimba silahlekile futhi isifo sohudo esivame ukusiphatha sihlasela umuntu. Ukubonakala kokuhlanza nge-pancreatitis akubandakanywa.
Inani le-ALT ku-pancreatitis nalo liyakhuphuka, futhi lokho kukhuphuka kungahle kuhambisane nokwanda kwe-alanine aminotransferase ngezikhathi ezi-6 ukuya kwezi-10.
Ngaphambi kokwenza ucwaningo lwe-biochemical for transferases, akunconywa ukuthi udle ukudla okungenani amahora angama-8.
Ngaphezu kwalokho, izidakamizwa ezingakhuphula okuqukethwe yilezi zinhlobo zama-enzyme akufanele zisetshenziswe. Musa ukwenza okungathi sína ngokomzimba ngaphambi kokunikela ngegazi ukuze lihlaziywe.
I-pancreatitis yisifo esihambisana nesiguli impilo yonke.
Ukuze inkambo ye-pancreatitis ingahambi nezikhathi zokuqhuma okukhulu, iziguli ziyelulekwa ukuthi zinikele njalo ngegazi ezifundweni ze-biochemical.
Ngaphezu kwalokho, iziguli kufanele njalo futhi ngokuhambisana nezincomo zikadokotela ozifundayo ziphuze umuthi wokumisa ukuqhubeka kwesifo nama-enzyme akhethekile aklanyelwe ukunciphisa umthwalo kumanyikwe.
Ngaphezu kwalokho, ohlelweni lokwelashwa, izidakamizwa kufanele zisetshenziswe, isenzo saso okuhloswe ngaso ukukhipha kanye nokususwa kwemikhiqizo evela ekubhujisweni kwezicubu ze-pancreatic.
Ukuhlolwa kwegazi kwe-ALT ne-AST kuchazwe kuvidiyo kule ndatshana.
Ubisi Thistle Umhluzi
Imbewu echotshoziwe yesitshalo (1 tsp.) Brew 250 ml wamanzi abilayo futhi uyiyeke ithele imizuzu eyi-15 ukuya kwengama-20. Cindezela futhi uphuze ½ inkomishi ekuseni nakusihlwa, isigamu sehora ngaphambi kokudla. Isikhathi sokwelashwa singamaviki ayi-2-3. Ithuluzi lisebenza ngempumelelo i-pancreatitis, hepatitis, kwesibindi ischemia. Masinyane ukuletha okumaka kwe-ALT ne-AST kubuyele kokujwayelekile.
Ukunciphisa i-aminotransferase egazini kuzosiza i-decoction ye-thistle yobisi
I-Dandelion Flower Tincture
Beka izimbali ze-dandelion embizeni (0.5 L) bese uthele i-vodka (150 ml). Ama-fluid adinga ukuma okungenani amahora angama-24 ukuthola izakhiwo zokupholisa. Udinga ukuthatha i-tincture nsuku zonke ye-2 tbsp. l Izikhathi ezi-3 ngosuku. Imiphumela iyabonakala ngemuva kwesonto lokwelashwa. Ukwelapha kuyizinsuku eziyi-14-21.
I-Dandelion tincture ijwayelekile i-ALT ne-AST
Izinwele ezisetshenzisiwe zamabelecobs (2 tsp) athululela ama-400 ml wamanzi abilayo. Ngemuva kwemizuzu engama-20, fafaza bese uthatha ingilazi eyi-1 kabili ngosuku izinsuku eziyishumi nane nesine.
Ama-stigmas ehlisa kahle ama-aminotransferase
Ukuhlisela ama-transaminases ngezindlela zemithi yabantu kufanele kuhlanganiswe nodokotela wakho. Uchwepheshe ngamunye uzokhetha izindlela zokupheka futhi akutshele umthamo ongeke ulimaze impilo yakho.
Ukwenza ngokushesha amazinga e-ALT ne-AST esegazini, kufanele unamathele ngokuqinile ekudleni kokudla. Ukudla kufanele kuqiniswe ngokudla ngevithamini D, futhi kuqede ngokuphelele ukudla okungenamsoco.
Ithebula "Imikhiqizo evunyelwe neyenqatshelwe enamazinga aphakeme wama-transaminase"
Okufanele kube ekudleni Imifino kanye nemifino - izaqathe, i-zucchini, i-broccoli, iparsley, i-dill, i-celery
Zonke izinhlobo zamajikijolo nezithelo ezintsha, kanye nezinsimbi noma ezibhakiwe.
Inyama engenantambo - inyama yenkomo, inyama yenkomo, inkukhu, unogwaja, isicubu. Amaqanda enkukhu
Imikhiqizo yezinhlanzi - i-caviar, isibindi se-cod
Okudingayo ukwenqaba Inyama enamafutha nazo zonke izinhlobo zamasoseji
Izitsha ezithosiwe, ezinamafutha, nezinongo, zibhemile
Ukhukhamba kanye ukhukhamba
Noma yiziphi iziphuzo ezinamagesi
Ukuhambisana nokudla kusiza ukubuyisela ukusebenza okujwayelekile kwesibindi nohlelo lwezinhliziyo futhi kuqinise ukubala kwegazi.
Ungavimbela ukwanda kwama-aminotransferases uma unamathela kuzinyathelo zokuvimbela eziphambili:
Hola indlela yokuphila enempilo, dlala ezemidlalo, nikeza ukukhetha ukuhamba ngezinyawo.
Yekani ukudla ukudla okungenamsoco notshwala ngokuphelele. Ungabhemi.
Gcina umkhondo wokusebenza ngokomzimba, ungasebenzisi umzimba ngokweqile.
Ukulawula isimo esingokomzwelo, ukuvikela ukucindezelwa nokuwohloka kwemizwa.
Musa ukuzindla futhi njalo (njalo ezinyangeni eziyisithupha) hlola ukuhlolwa kwegazi okune-biochemical ukulawula abamaka abakhulu.
Ukuhamba ngezinyawo kuhamba kahle kakhulu empilweni yakho.
Uma ubhekisisa impilo yakho ngokucophelela futhi ungazinaki izimpawu zokuqala zezifo, ungavimbela ukuthuthukiswa kwe-pathologies enzima.